Xarakada Al-Shabaab oo isaga baxay degmada janaale | stn radio	Wednesday, November 26th, 2014	Home
Xarakada Al-Shabaab oo isaga baxay degmada janaale
Feb 14, 2013 - Aragtiyood	Wararka ka imaanaya degmada Janaale ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay kaabiga u saaran yihiin, kadib markii ay isaga baxeen Xarakada Al-Shabaab.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa tan iyo shalay u gar-guuranaya degmada Janaale oo ah deegaan ku caan ah wax soo saarka Beeraha, kaasoo ka mid ahaa deegaanada ay sida xoogan uga talinayeen Shabaab.
Mid ka mid ah dadka deegaanka Janaale ayaa sheegaya in ilaa iyo hada aan wax ciidan soo gaarin Janaale, hase ahaatee Ciidamadii Shabaab ay isaga baxeen, halka Ciidamada kale ee dowladda iyo AMISOM ay afka u saaran yihiin Janaale.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya inay jireen iska hor imaadyo goos goos ah oo ka dhacayay deegaanada u dhaxeeya Shalanbood iyo Janaale.
Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa sheegay inay gacanta ku dhigi doonaan degmada Janaale oo uu tilmaamay inay muhiim ugu tahay sugida amaanka deegaanada muhiimka ah sida xarunta gobolka ee Marka.
Janaale ayaa u jirta Marka qiyaastii 15-KM, waxaana ciidamada u dhaqaaqay ay maalmihii u dambeeyay wadeen guluf dagaal oo ku aadan deegaanada ku haray gacantaxarakada al- Shabaab ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Shalay ayay aheyd markii Maamulka Shabellaha Hoose uu ku hanjabay inay qabsan doonaan degmooyinka Janaale iyo Khoryooley.